Sweden ႏိုင္ငံက Microchip လူသားမ်ား - PX
မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ကားသော့၊ Credit Card လို ပစ္စည်းတွေ အိမ်မှာမေ့ကျန်လို့ ဒုက္ခရောက်မယ့်အဖြစ်မျိုး ကြုံရစရာမရှိတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထမင်းလုံးသာသာလောက် သေးငယ်တဲ့ Microchip တွေကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီး အပေါ်က ပစ္စည်းတွေမလိုအပ်ပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာကြောင့်ပါ။ မယုံမရှိပါနဲ့။ Sweden နိုင်ငံမှာ လေးထောင်ဝန်းကျင်သော လူတွေဟာ Microchip တွေကို စတင်အသုံးပြုနေကြပါပြီ။
တကယ်တော့ Radio-Frequency-Identification (RFID) ဆိုတာ Credit Card, Security Card, Train Ticket, Car Remote စသည်ဖြင့်နေရာတွေမှာ တစ်ဖက်က User ရဲ့ Information Data တွေကို Near-Field Communication (NFC) စနစ်ကတစ်ဆင့် လက်ခံတဲ့စက်ကို မှတ်မိစေတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ အပေါ်မှာပြောသွားတဲ့ Microchip ဟာ အဲဒီ Information တွေကို ထည့်သွင်းထားနိုင်တဲ့ All-in-one Chipset ပုံစံအလုပ်လုပ်ပြီး လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကြားနေရာမှာ ထည့်မြှုပ်ထားရုံနဲ့ အသုံးလိုတဲ့နေရာတွေရောက်ရင် လက်ကို စက်နဲ့ 2.5 cm အကွာမှာ Scan ဖတ်ရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဒီ Microchip လေးမှာ ဘယ်လို Data တွေကို မှတ်ထားနိုင်မလဲ?
Bank Account, Credit Card Number, ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ PC, Social Media, Smartphone စတာတွေရဲ့ ID နဲ့ Password တွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ သွေးအမျိုးအစား၊ ကိုယ်နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့အရာ စတဲ့ Data တွေကို မှတ်သားသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ အနာဂတ်မှာ GPS စနစ်ကိုပါထည့်သွင်းပြီး User ရဲ့ လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကိုပါ ထောက်လှမ်းရှာဖွေနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေကြပါပြီ။
ဆိုတော့ကာ Foreign Body အနေနဲ့ ဒီ Microchip တွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလား?
အဖြေက No ပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ RFID ကြောင့် လူတွေမှာ Cancer ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသလို တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း မရှိသလောက်နဲပါးတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ University of Washington ရဲ့ Bioengineering Department မှာဆိုရင် RFID Chip တွေကိုသုံးပြီး Cancer ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Tumor အကျိတ်တွေကို ကုသဖို့တောင် ကြိုးပမ်းနေကြပါပြီ။
တကယ်တော့ စက်ပစ္စည်းတွေကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာဟာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ Pacemaker လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးခုန်စက်ကို စတင်တပ်ဆင်ခဲ့တာကလည်း 1958 ခုနှစ်၊ Sweden နိုင်ငံက Karolinska Institute မှာပါပဲ။ (ဆွီဒင်က ဒီအပိုင်းမှာ အတော်အားသန်ပုံရတယ်ထင်ရဲ့) နောက်ပြီး ဆေးပညာဘက်မှာ လူ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် Bionic Prosthetics (လက်တု၊ ခြေတု) တွေကိုလည်း အသုံးပြုနေကြပြီဆိုတော့ Microchip ကိစ္စဟာလည်း ပိုပြီးတွင်ကျယ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတိုင်းမှာ အားနည်းချက်၊ ဟာကွက်ဆိုတာလည်း ရှိစမြဲပါပဲ။ Microchip အသုံးပြုမယ့်သူတွေအနေနဲ့လည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ ပထမတစ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ပါ။ GPS စနစ်လို တပ်ဆင်ထားတဲ့ Microchip ကနေ ကိုယ်ဘယ်သွားတယ်၊ ဘယ်မှာနေနေတယ်ဆိုတဲ့ Info ကြီးကို လှမ်းရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကြီးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားရစေနိုင်တယ်။
ဒုတိယတစ်ချက်က Hacker တွေရဲ့ ရန်ပါ။ ရာနှုန်းပြည့်လုံခြုံတဲ့ နည်းပညာဆိုတာ မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို Microchip လေးတစ်ခုထဲကနေ ခိုးယူသွားတာမျိုး ကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် Sci-fi Movie တွေထဲကလို Microchip သုံးတဲ့သူအချင်းချင်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့ Data တွေ Hack သွားတာမျိုးလောက်ထိတော့ နည်းပညာအဆင့်အတန်းမမြင့်မားသေးပါဘူး)
နောက်ဆုံးအချက်က ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်မှုပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကတော့ လက်မှာ Microchip ထည့်တာဟာ သမ္မာကျမ်းစာ (Revelation 13) က Mark of the Beast ဆိုတာနဲ့ သွားတူနေတာကြောင့် မနှစ်မြို့၊ဆန့်ကျင်တာမျိုးတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဘာသာရေးနဲ့ သိပ္ပံပညာကြားက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဝိရောဓိဖြစ်စရာအချက်လေးတွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ နည်းပညာရဲ့တိုးတက်မှုဟာ လူသားတွေရဲ့ Daily Life ကို ပိုမို Smart ကျ၊ လွယ်ကူစေတာမှန်ပေမယ့် တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေရဲ့ လုံခြုံမှုဟာ ပိုပိုပြီးနည်းပါးလာတယ်လို့ ခံစားရစေတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့၊ ATM စက်တွေတောင် လိုင်းခဏခဏကျတတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနာဂတ်မှာ နည်းပညာနဲ့ လူနေမှုဘဝ ကြားကအဖြေဟာ လူသားတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာပဲ အများဆုံးမူတည်နေပါလိမ့်မယ်။
Photos: NPR.org, Zero Hedge.
IMX600/Kirin 980 ပါဝင်လာမဲ့ Honor 20 Pro